Beluga sy Dreamlifter
fanontaniana Beluga sy Dreamlifter
2 taona 7 volana lasa izay #48 by Dariussssss
Andro vitsy lasa izay, nanomboka ny fivoriana farany nataon'ny Beluga vaovao i Airbus, izay hiorina amin'ny A330-200. Ary izany no nahatonga ahy hieritreritra .... azon'izy ireo atao ve izany? Izany hafa dia antsoina hoe Boeing 747 Dreamlifter.
Hitako fa sarotra ny mahatakatra ny fanapahan-kevitra handany an'arivony, raha tsy tapitrisa dolara, euros ... na inona na inona mba hampivelarana ny Beluga vaovao. Mety diso aho fa, tsy mora kokoa ny manova ny A380 noho io anjara asa io?
2 taona 7 volana lasa izay #49 by superskullmaster
Heveriko fa ny LCF dia tena goavana tahaka ny olona mila mandeha hatrany amin'ny entana entana feno entana. Ny A380 dia niafara ho fiaramanidina nasiaka toy ny An-225.
Fotoana mamorona pejy: 0.291 segondra